Mercury ဆိုတာက ပတ်ဝန်းကျင်မှာ သဘာဝအတိုင်းလည်းတွေ့နိုင်တဲ့ ဒြပ်စင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုတော့ Mercury ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲ့ ဘယ်လိုကုစားယူကြမလဲဆိုတာတွေကို RecyGloနဲ့ ဒီကနေ တူတူလေ့လာကြရအောင်နော်။
Mercury တွေက လူသားတွေကို ဘယ်လိုမျိုးထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းကိုတော့ - ဒီကနေတစ်ဆင့်ဖတ်ရှူနိုင်ပါတယ်။ တကယ်တော့ Mercury က လူသားတွေ၊ပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုသာမက အစာကွင်းဆက်တွေကိုလည်း ထိခိုက်ပျက်စီးစေပါတယ်။ ၁၉၅၀ ပြည့်နှစ်တုန်းက ဂျပန်နိုင်ငံ၊ မီနာတာမာပင်လယ်အော်အတွင်း အော်ဂဲနစ် မာကျူရီတွေကို စွန့်ပစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရလဒ်ကတော့ ပင်လယ်အော်ထဲရှိ ငါးတွေက မာကျူရီအဆိပ်သင့်ခဲ့ပြီး အဆိပ်သင့် ငါးတွေကိုစားသုံးခဲ့တဲ့ လူပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကိုလည်း ထပ်မံပြီးအဆိပ်သင့်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒီအဆိပ်သင့်ငါးတွေကို စားသုံးမိတဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေကနေ မွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်က အာရုံကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေကို ခံစားစေခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီ့ကလေးငယ်တွေမှာဆိုရင် ကိုယ်ခန္ဓာပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုနှင့် တုံ့ပြန်မှုများ၊ ဦးနှောက်ရဲ့ ပုံမှန်မဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့် စကားမပြောဆိုနိုင်ခြင်း စတဲ့ ရောဂါ‌လက္ခဏာတွေခံစားရတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအဆိပ်သင့်ငါးတွေကို စားသုံးမိတဲ့လူကြီးတွေမှာဆိုရင်လည်း အမြင်အာရုံချို့ယွင်းခြင်း၊ ခြေလက်များတုန်ခါခြင်း၊ အားနည်းခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်း၊ အကြားအာရုံဆုံးရှုံးခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊အာရုံရှုပ်ထွေးခြင်း၊ အစားစားခြင်စိတ်ပျောက်ဆုံးခြင်းနှင့် မှတ်ဉာဏ်ပြဿနာတွေခံစားရတာကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ဒီအဆိပ်သင့်မှုကြောင့် လူပေါင်း ၄၆ ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ့အပြင် ၁၉၇၂ ခုနှစ် အီရတ်နိုင်ငံတွင်လည်း မာကျူရီဓါတ်ပါဝင်သော ဂျူံမှူန့်ဖြင့်ဖုတ်ထားတဲ့ ပေါင်မုန့်ကို စားမိတဲ့အတွက် လူပေါင်း ၆၅၀၀ ကျော်အဆိပ်သင့်ခဲ့ပြီး ၄၅၉ ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် မိမိပတ်ဝန်းကျင်မှာ မာကျူရီကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာရတာတွေထပ်မံမဖြစ်စေဖို့ ဝိုင်းဝန်းကာကွယ်ဖို့ ကျွန်တော်တွေအားလုံးမှာလည်း တာဝန်ရှိပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်မှာ မာကျူရီဓါတ်ပါဝင်တဲ့ အီလက်ထရောနစ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေရှိနေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်စွန့်ပစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ RecyGlo Myanmar နှင့်အတူပူးပေါင်းပြီး E-waste Recycling Services တွေကို ရယူဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အသေးစိတ်ကိုတော့ Appointment ယူပြီးဘယ်လို Recycling ဝန်ဆောင်မှုမျိုးက သင်နဲ့သင့်တော်မလဲဆိုတာတွေကို contact@recyglo.com နဲ့ communication@recyglo.com တို့ကိုတိုက်ရိုက် Email ပို့ပြီး သင့်အတွက်ကော သင့်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ပါလံှုခြုံစိတ်ချမှုတွေနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းပါရစေနော်။
Do you know the disasters caused by Mercury?
Mercury isatype of heavy metal that occurs naturally in the environment. You can read more about how Mercury harms humans :
In fact, Mercury harms not only humans and the environment, but also the food chain. Organic mercury was dumped into Minamata Bay in the 1950s. Fish in the bay were contaminated and about 2,000 people who ate these fish became poisoned. About 7% of the children born to mothers who ate contaminated fish had neurological problems. Symptoms in these children included uncoordinated movement, abnormal reflexes, seizures and speech problems. Some adults also had neurological problems such as visual disorders, shaking (tremors), weakness, nausea, hearing loss, depression, confusion, loss of appetite and memory problems. A total of 46 people died asaresult of mercury exposure. In 1972, approximately 6,500 people fell ill and 459 people died after eating bread baked with wheat contaminated withamercury-based fungicide. So, we all havearesponsibility to protect our environment from further mercury damage. If you have mercury-containing electronic waste and want to dispose of it in an environmentally friendly way, partner with RecyGlo Myanmar to get E-waste Recycling Services.
You can set up the appointment by having consultancy for more services which suit your inquiries through contact@recyglo.com and communication@recyglo.com.
www.recyglo.com #Stay_Safe #Road_To_Green_Environment #Grow_With_RecyGlo